अति विपन्न दलित परिवारका काँशीराम बिश्वकर्मा बने डाक्टर ! | ebaglung.com
अति विपन्न दलित परिवारका काँशीराम बिश्वकर्मा बने डाक्टर !
२०७४ श्रावण ९, सोमबार १९:०९	Top News, अन्य समाचार, विविध 980 पटक हेरिएको !
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७४ साउन ९ । आर्थिक अभावका कारण पढ्न सकिन भन्नेहरुलाई गतिलो जवाफ दिदै गुल्मीका एक अति विपन्न दलित परिवारका युवा यति वेला डाक्टर बनेका छन् । मालिका गाउँपालिका वडा नम्वर १ साविकको नेटा गाविसका काँशीराम बिक लुम्विनी मेडिकल कलेज पाल्पा प्रभासबाट यसै हप्ता एमबिबिएस डाक्टर बनेका हुन् ।
साविकको नेटा गाविसमा सामन्य खरको झुपडीमा जन्मएका बिकको दुई महिना पनि खान नपुग्ने जमिन रहेको र उनि जस्ता विपन्न डाक्टर बन्नु भनेको हामी सवैका लागि गौरव र प्रेरणाको विषय बनेको स्थानिय शिक्षक प्रेम बिकले बताए ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट संवोधन प्राप्त लुम्विनी मेडिलक कलेज प्रभास पाल्पमा ४ वर्ष सम्मको अध्यान सकेर यस हप्ता देखि एमबिबिएस डाक्टरको जिम्मेवारी सम्हालेका २६ वर्षिय बिकले आफुले एसएलसी पास गर्ने बेला सम्म डाक्टर बनुँला भन्ने कल्पना समेत नगरेको प्रतिकृया दिए ।
२०६५ सालमा सरस्वती मावि साविकको नेटा–३ बाट ७५.५ अंक लिई एसएलसी गरेका बिकको स्कुले विद्यार्थी जिवन काहली लाग्दो भएको उनि आफै स्वीकार गर्छन् ।
डाक्टर बिकको विगत र वर्तमान उनि आफैबाट
‘पिता टोकबहादुर बिक, काम गर्न नसक्ने विरामी हुनुहुन्थ्यो , आमा मनरुपाको निमेक मजुरीबाट पढेको हुँ । दुई वटी आमाहरु हुनुहुन्थ्यो । फाटैकै जाँगे लगाएर पढेको हो , अहिले नसोचेकै सफलता प्राप्त भयो , यसको श्रेय म मेरो प्रत्येक सहयोगीलाई दिन चाहन्छु ।
ती मध्येका एक जना जो मेरा छिमेकी र गुरु पनि हुनुहुन्छ दिनानाथ पौड्याल जसले मेरो जीवनमा नसोचेकै सपना पुरा गराई दिनु भयो , उहाँलाई मैले जति सम्मान गरे पनि कम हुन्छ । एसएलसी पास गरेपछि म उहाँकै वोलावटमा पहिलो पटक काठमाडौं पुगेको थिएँ ।
सोच्न त विज्ञान विषय लिएरै पढ्छु भन्ने सोचेको थिएँ तर उहाँको सहयोग विना म काठमाण्डौ ६ महिना पनि बस्न सक्ने अवस्था थिएन । अन्ततः म उहाँकै कोठामा ६ , ७ महिना बसेर पढें । पछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट उहाँकै पहल र मेरो मेहनतमा स्कलरशिप पाएँ ।
त्यस पछि होस्टलमै बसेर बढ्दै यहाँ सम्म आएको हुँ, । म एकदम लक्की हुँ, जसले त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थामा आउने अवसर पाएँ, यसर्थ पनि म हिजो जस्तै विकट र विपन्न समुदायको सेवा गर्ने चाहना राखेको छु । ’
उनको विपन्न परिवारमा कहिले पहिरोले घर पु¥यो । कहिले आगो लागी भएर ज्यु धनको क्षति समेत भयो । तर पनि उनले कत्ति हरेस खाएनन् । फलस्वरुप उनि डिग्री होल्डर गुल्मीका दलित समुदाय मध्ये प्रकाशमा आएका सम्भवतः उनै पहिलो डाक्टर हुन् ।
उनि थन्छन्–‘ खै यसअघि हाम्रो समुदायबाट गुल्मीमा अरु डाक्टर बनेको मैले पनि सुनेको छैन, सम्भवतः म नै हुँ कि भन्ने लागेको छ तर त्यसको आधिकारिकता भने छैन ।
एउटै वडामा दलितहरु डाक्टर सहित ७ जना डिग्री होल्डर
डाक्टर बिककै गाउँ नेटा हो जजहाँ सदरमुकाम तम्घास लगायत जिल्लाभरका दलितहरु भन्दा त्यहाँका दलितहरु र्शैक्षिक रुपमा धेरै अगाडी छन् ।
उनि एक जना डाक्टर सहित त्यस गाउँमा ७ जना डिग्री होल्डर बिश्वकर्माहरु छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीका विद्यालय निरीक्षक झविलाल बिक, सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत विजय बिक, नेपाल प्रहरीका पुर्व प्रहरी निरक्षक राजेन्द्र बिक, प्रहरी सहायक निरक्षक विनय बिक, अमिन कल्पना बिक र कमला बिक त्यहाँका डिग्री होल्डरहरु हुन् । सोही स्थानका स्नातक उतिर्ण धर्मेन्द्र बिश्वकर्मा काठमाण्डौ खानेपानी विभागमा सुव्वा तहमा कार्यरत रहेका छन ।
स्नातक र सो भन्दा तल अध्यानरत ८ जना दलित समुदायका युवा युवती त्यहाँ शिक्षक रहेका छन् । सुन्तली परियार , सीता बिक, तारा बिक, रुमा बिक, प्रेम बिश्वकर्मा, सिता अर्याल बिक, सोनु बिक शिक्षक पेशामा कार्यरत छन् ।
त्यस्तै पुनाराम बिक, अर्का प्रेम बिक, माया बिक, सुनिता बिक, दिलमाया बिक, सविता बिक, सजना बिक, दानबहादुर बिक, भिमबहादुर बिक, नविन बिश्वकर्मा , राहुल विक सहित दलित समुदायबाट २४ जनाले प्रविणता प्रमाण पत्र तहको अध्यान प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै विज्ञान विषयमा ३ जनाले प्रविणता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् । , सिएमए २ जनाले गरेका छन् । सो सरहको अध्यान गरेका नेपाल प्रहरीमा दुई जना र नेपाली सेनामा २ जना रहेका छन् ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार अहिले नयाँ पिढीमा १३ जनाले प्रवेशिका परिक्षा उतिर्ण गरेका छन् । सावित्रा बिक, थमन बिक, राजु बिक, चन्द्र बिक, ज्योति बिक, शान्ति बिक, शिवा बिक, कमला परियार , लक्ष्मी बिक, विमल बिक, दिपक बिक, वालकृष्ण बिक, र लिलबहादुर बिक प्रवेशिका परिक्षा उतिर्ण गरी क्याम्पस पढ्दै रहेको अमर मावि नेटाका विज्ञान विषयका शिक्षक प्रेम बिकले बताए । त्यहाँका दलितहरु अर्काको घरमा निमेक मजदुरी गरेरै भए पनि छोरा छोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता धेरै अघि देखि नै राख्दै आएका छन् ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार २ सय ४७ दलित घरधुरी र उनिहरुको जनसंख्या १५ सय ८४ रहेको छ । जहाँ अन्य जाती छैनन् । ३ सय २२ घरधुरी जनजातीमा २६ सय ३६ उनिहरुको जनसंख्या रहेको छ । जनजातीको जनसंख्या बढि रहे पनि दलितहरुको तुलनामा जनजातीहरु शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै पछाडी रहेको मालिका वडा नम्वर १ का वडाध्यक्ष ईन्द्रबहादुर घर्तिले बताए ।
उनले भने–‘ खै के भन्नु , दलितका छोरा छोरी कोही डाक्टर बने, कोही विनि छन तर जनजातीहरु मध्ये कतिपय अहिले पनि बाटोमा जाँड खाएर लडेको दृश्य देख्नु पर्दछ । ’ जेहोस पछिल्लो चरण धेरै जनजातीहरु पनि सु–सुचित हुँदै आएकोले उनिहरु पनि शैक्षिक क्षेत्रमा लम्कीदै जान थालेको उनले बताए ।
राजनैतिक रुपमा पनि त्यहाँका दलितहरु अगाडी नै छन् । नेपाली कांग्रेसका घर्तिले झिनो मतले माओवादी केन्द्रका उमेदवार जितबहादुर सुनारलाई हराएर वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । पराजित सुनारका स्वर्गिय पिता त्यस गाउँमा तवेलामा घोडा पाल्ने पहिलो व्यक्ति थिए । उनि त्यस गाउँमा संभ्रान्त परिवारमा गनिन्थे ।
तस्वीरः विपन्न दलित परिवारबाट डाक्टर बनेर कार्यभार सम्हालेका उनै डाक्टर बिक
बडीगाड गापाले मृतकका परिवार र घाईतेको उपचारकालागि १० लाख दिने !
गुल्मीमा लक्षित वर्गको रकममा दलितहरु विचमै लुछाचुँडी र कुटपीट